कोरोना जितेर नेपाल आयौं भने तिम्रो सत्ता माटोमा मिलाइ दिन्छौं – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोना जितेर नेपाल आयौं भने तिम्रो सत्ता माटोमा मिलाइ दिन्छौं
कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व रोइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको जानकारी अनुसार आजको तथ्यांक २,८७,३३६ जनाले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाई सकेका छन् । साथै ४,२५६,०५३ जना भने अहिले यसको संक्रमणको चपेटमा छन् । कोरोनाले दिन प्रतिदिन दिब्र रूप लिँदैछ । कोरोनाले संसारमा यत्रो विध्वंस मच्चाइरहँदा यसका विरुद्धको औषधि बन्नका लागि भने अझै लामो समय लाग्ने बैज्ञानिकहरुको भनाइ रहेको छ ।
महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा विश्वमा रहेका हरेक देशले आफू र आफ्नो नागरिकको संरक्षण र खोजि गरी राखेको देखिन्छ । साथै विदेशमा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देश भित्राउने, विदेशमा खान र बस्न को सुबिधा, नागरिकको सुरक्षा र उद्धार कार्य गरिरहेको पाइन्छ । त्यस्तै हरेक देशले यो कार्य गर्न र गराउनका लागि आफ्नो दुतावास र आफ्नै राजदूतलाई जिम्मेवारी दियएका हुन्छन् । हो, संकट र महामारीका बेलामा मात्र नभई विदेशमा कुनै पनि नागरिकले दुःख पाउँछ र हार गुहार माग्छ भने उसको खोजि गर्नु राजदुतको काम हो ।
नेपालीलाई विदेशीनु कुनै रहर होइन । नेपालमा रोजगारी नमिले पछि आफू र आफ्नो परिवारको पेटका लागि विदेशीन पुगेका हुन् । कोरोनाभाइरसले गर्दा अहिले लाखौं नेपाली नागरिकहरू देश बाहिर जिउनु र मर्नुको अव्स्थामा अलपत्रमा छन् । मलेसिया, दुबई, अमेरिका, जापान, भारत लगायत थुप्रै देशमा रहेका नेपालीहरु भन्छन्, ‘महामारीका बेला दुःख पायौँ, रोजगार छैन, न त नेपाल जान पायौँ, अब के खाने ? अब के गर्ने ? हामीले आफ्नो दुतावासलाई सबै कुरा सुनायौँ, तर कसैले सुन्दैन ।’
त्यस्तै भारतस्थित अलपत्र नेपाली भन्छन्, दुई महिना जसरी–तसरी बाँचियो, अब भने खाने खर्च छैन, कोठा भाडा नदिएकाले कोठा छोड्नु पर्यो, नेपाली दुतावासले फोन नै ऊठाउँदैन, अब हामी कहाँ जाने ?
भारतमा अहिले कोही खान नपाई भोक भोकै मरे, त कोही उपचार नपाएर अकाल मै मरे भने लाखौँ मजदूरहरु अलपत्र अवस्था मा भोक भोकै तड्पि रहेका छन् ।
यी सबै घटना र दुःख देखिदेखि र समस्या बुझेर बुझ पचाउँदै छ दुतावास र नेपाल सरकार । यदि यस्तै ब्यवहार भै रह्यो भने भोली विदेशका सबै दुतावासहरु खारेज गरिदिए हुन्छ । समस्या पर्दा काम नलाग्ने दुतावासको के काम छ ? ओली जी तपाइँको यही व्यबहार भै रह्यो भने भोली विदेशबाट हामी आउँछौं, कोरोनाको आँधी र तुफान लिएर तर त्यति बेला तिमी जोगीन पाउने छैनौँ ? तिमी र तिम्रो नालायक सरकार कहाँ पुग्ने छ त्यतिबेलै थाहा पाउने छौ ।
हालः नयाँदिल्ली भारत
सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने पक्राउ
निया शर्माले जीतीन ‘ खत्रों के खेलाडी मेड इन इण्डियाको टर्फी